कोभिड-१९: सधैँ रहिरहन सक्छ - यो सँग हामीले कसरी बाँच्न सिक्न सक्छौँ? - BBC News नेपाली
कोभिड-१९: सधैँ रहिरहन सक्छ - यो सँग हामीले कसरी बाँच्न सिक्न सक्छौँ?
लगभग ९० प्रतिशतले जवाफमा 'सकिन्न' भन्ने उत्तर दिएका थिए।
अबको पाँच महिनामा नेपालले कहाँबाट कति खोप भित्र्याउँदै छ
''आज हामीसँग जुन खोप उपलब्ध छन् तीनले केही अवस्थामा सङ्क्रमणलाई रोक्दैनन्। तीनले सङ्क्रमणलाई परिमार्जन र रोगलाई कम गम्भीर भने बनाउँछन् । खोप लगाएका मानिसहरूले अरूलाई भाइरस सार्न सक्छन्,'' लन्डन स्कुल अफ हेल्थ एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनमा इन्फेक्सीअस डिजिज इपिडेमीओलोजीका प्राध्यापक डेभिड हेम्यानले भने।
''कोभिड कहिल्यै जानेछैन,'' उनी अनुमान गर्छन्।
''हामीले खोप लगाए पनि नलगाए पनि जीवनभर पटक पटक सर्ने (भाइरस) कुरा अवश्यम्भावी छ।''
भाइरसको एउटा 'उद्देश्य' हुन्छ : सकेसम्म धेरै मानिसहरूमा फैलने जसका कारण उत्परिवर्तन हुनु सामान्य मानिन्छ।
''जीव विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भाइरसमा उत्परिवर्तन हुनुपर्छ ताकि यो धेरै मानिसमा पुगोस्। धेरै सहज रूपमा फैलने भाइरस सफल भाइरस हो,'' अक्सफर्ड विश्वविद्यालय ग्लोबल हेल्थ विषयका प्राध्यापक ट्रुडी ल्याङ् बताउँछीन्।
जोनसन एन्ड जोनसन खोपबाट समस्या देखा पर्न सक्ने चेतावनीबारे नेपाल सरकारले 'अनुसन्धान गर्ने'
यद्यपि ब्रिटेनको न्याशनल हेल्थ सिस्टम (एनएचएस)ले जाडो मौसमअघि तीन करोड तेस्रो मात्रा वा ''बुस्टर'' लगाउने योजना बनाएको छ।
''सम्भव भएसम्म प्रकोपलाई सम्बोधन गर्न क्रममा सरकारका लागि लकडाउन अत्यावश्यक अस्त्र बन्ने छ,'' सिटी युनिभर्सिटी अफ हङ्कङ्मा हेल्थ सेक्योरीटी विषयका सह प्राध्यापक निकोलस टमसले ब्लूम्बर्ग समाचार संस्थालाई भने।
''यो प्रस्ट छ कि प्रत्येक पटक बढ्दा लकडाउन गरिरहन सकिँदैन,'' द युनिभर्सिटी अफ कोपनहेगनकी बिहेभिएरल साइन्टिस्ट क्रिस्टीना ग्राभर्ट भन्छिन्।
''समानुपातिक रूपमा खोप वितरण नभएका कारण डब्ल्यूएचओले 'खोप राहदानी' सिफारिस गर्दैन। तर मलाई लाग्छ की केही राष्ट्रहरूले यसको प्रयोग गर्नेछन्,'' उनले भने।